ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်Little က Iniesta"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝမှထမြောက်ပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းမိမိအချောမောရူပ, ပြဇာတ်၏သေးငယ်တဲ့ဘောင်နှင့်စတိုင်အကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောဟယ်ရီစှပွေခွငျး '' အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-အစောပိုင်း & မိသားစုဘဝ
ချွတ်စတင်ခြင်း, မိမိအမည်အပြည့်အစုံဟယ်ရီ Billy စှပွေခွငျးဖွစျသညျ။ ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကိုသူသိသကဲ့သို့ဖေဖော်ဝါရီလ၏ 2nd နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည် သူ့အမိကား, Anita စှပွေခွငျးနှင့် Hemel Hempstead, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ဖခင်ဂယ်ရီစှပွေခွငျးမှ 1996 ။
ဟယ်ရီမိသားစုမေတ္တာရှင်တစ်ဦးဘောလုံးမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ့ဖခင်ဂယ်ရီ Hemel နှင့် Berkhamsted အဘို့ကစားသူတစ်ဦးကိုယခင် Semi-ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစှပွေမိသားစုစပါးယူအီးအက်ဖ်အေခွက်ကိုအနိုင်ရရှိပြီးနောက် 1984 ကတည်းကအစောပိုင်းအပေါ်တစ်ဦးအသက်တာရှည်စပါးထောက်ခံသူခဲ့သညျ။
မိသားစုသမိုင်းသို့မဟုတ်မူရင်းစကားပြောသောဟယ်ရီစှပွေသူ့မိခင်နှင့်အဘိုးအဘွားမှတဆင့်စပိန်နွယ်ဖွားတစ်မိသားစုမှဆင်းသက်လာသည်။ သူကသူ့အဖေကတဆင့်ဗြိတိန်ဖြစ်ခြင်း၏သို့သော်ဂုဏ်ယူသည်။ ဟယ်ရီသူအလွန်အကာအကွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကို Milli အမည်ရှိသည်သူ၏ညီမငယ်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာတယ်။
လက်ရှိတွင်အရေးအသား၏အချိန်ကဲ့သို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှဟယ်ရီ, Milli နှင့်၎င်းတို့၏မိခင် Anita အကြားမျှဝေကြောင်းကိုအားကြီးသောနှောင်ကြိုးရှိပါတယ်။
ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup
ကိုယ့်ကသူ့မိခင်နှင့်ဖခင်နဲ့တူဟယ်ရီတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သော တင်ဟမ်ဟော့စပါး သူကဘောလုံးကစားခြင်းကိုစတင်မီကပင်ပန်ကာ။ ဟယ်ရီသူခြောက်ဦးသည်အသက်ရသောအခါဝှိုက်ဟတ်လိန်းမှာမိမိအမှတ်ရစရာပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်သို့တက်ရောက်သည်။ ၏အကြိုက်ကိုမြင်လျှင် မိုက်ကယ်ကားရစ်, ရော်ဘီကိန်းနှင့် Teddy Sheringham ကဘောလုံးဘောလုံးပုံပေါက်နေသောအရာအားလုံးကိုစတင်ကန်ရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်သူမ၏သားရဲ့ဘောလုံးအတှေ့အကွုံအကြောင်းကိုပြောဟယ်ရီ Wink ရဲ့မိခင် Anita တစ်ချိန်ကပြန်တမ်းကိုပြောသည်:
"တောင်မှသေးငယ်တဲ့ကလေးကအဖြစ်ဟယ်ရီတစ်ဦးရှင်းပြီ-up, SOCKS နှင့်အတူဆော့ကစားမည်ဖြစ်သည်။ သူဟာနေရာတိုင်းမှာလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်က dribbling လိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သူတစ်ဦးတင်းနစ်ဘောလုံးကိုပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူကအမြဲရူးသွပ်ငါ့ကိုမောင်း, အပေါငျးတို့သညျအိမျန်းကျင်ကကန်ခံရချင်ပါတယ်! "
သူကသူ့မိသားစုကိုနေအိမ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်အတွင်းတစ်ဦးဘောလုံးဘောလုံးကိုကန်မထားလျှင်, ဟယ်ရီ၏ပိုစတာအားဖြင့်အနီးဝန်းကျင်လောကအတွက်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟု ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း နှင့် မိုက်ကယ် Owen ။
စပါးများအတွက်ဟယ်ရီရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနေသော်လည်းသူသည်အင်္ဂလန်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီတိုနှင့်အတူမိမိကိုမိမိကော်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အထက်ကသူ့ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ခြင်း, သင်ကသူ့အကြိုက်ဆုံးဂျာစီပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်လေ့လာတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး Start ကို
သူ့မိဘရော့စ် & အန်ဒီရဲ့ဘောလုံးစခန်း၏တန်းစီဇယားမှာသူ့ကိုစာရင်းသွင်းသည့်အခါဟယ်ရီရဲ့အလားအလာပထမဦးဆုံး5၏အသက်အရွယ်မှာပြောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူကနောက်ထပ်မိမိပကတိအခွက်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်မှာ Hemel Hempstead အတွက် Echoes FC အသင်းနှင့်အတူကစားရန်ပေါ်သွား၏။
ဟယ်ရီကောင်းတစ်ဦးစွမ်းအင်နှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်နှင့်သူ၏သွယ်ဘောင်ရှိနေသော်လည်းသူနေဆဲကောင်းသောလုံနှင့်အတူအစေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးရလိမ့်မယ်။ အစောပိုင်းအပေါ်ဟယ်ရီသူ 11 ၏အသက်အရွယ်မှာဘွဲ့ရရှိရာဂုဏ်သိက္ခာ Cavendish ကကျောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အစောပိုင်းဘောလုံးပညာရေးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- စပါးမှာအစောပိုင်းဘဝ
ဆိအဖြစ်ဘောလုံးကိုကိုင်တွယ်ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဟယ်ရီတင်ဟမ်ဟော့စပါးစမ်းသပ်မှုတွေတက်ရောက်ရန်ရော့စ် & အန်ဒီရဲ့ဘောလုံးစခန်းမှာမိမိနည်းပြဆရာများကအကြံပြုခဲ့သည်။ သူလွန်ခြင်းနှင့်ကလပ်မှာစာရင်းသွင်း။ တောင်မှစပါးအကယ်ဒမီမှာများစွာသောကလပ်နေဆဲကလေးငယ်များအတွက်အဖြစ်သူ့ကိုရယူရန်။
ဟယ်ရီရဲ့မိဘများ Anita နှင့်ဂယ်ရီဟယ်ရီစပါးမှာမိမိအစောပိုင်းကာလအတွင်းမှာဖန်ဆင်းတော်မူပြီသောများစွာသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားအလေးပေးရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာလူငယ်တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်, စှပွေခွငျးကြီးထွားလာဒဏ်ရာများနှင့်နောက်ကျောကိုဒုက္ခခံစားခဲ့ရတယ်။ ကြောင်းနေသော်လည်း, အကယ်ဒမီဦးစီးချုပ် McDermott သူနှောင်းပိုင်းတွင်-developer များနှင့်အတူပြုသကဲ့သို့ငယ်ကောင်လေးက၌ယုံကြည်ခြင်းခဲ့ကဲ့သို့သော ကိန်း နှင့် Andros Townsend။ ပင် Teddy Sheringham ငယ်ရွယ်စှပွေတစ်ဦးနီးကပ်စိတ်ဝင်စားမှုကို ယူ. Scott Parker တစ်ဦးဆရာအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame ဖို့နဲ့ Big ဆုံးဖြတ်ချက် & ထ
သူ့အိပ်မက်အားမိမိအသက်တာကိုအပ်နှံနိုင်ရန်အတွက်ဟယ်ရီဟာစပါးလေ့ကျင့်ရေးမြေပြင်နှင့်နီးစပ်သောအသက်ရှင်ဖို့အသက်အရွယ် 16 မှာမိသားစုနေအိမ်ထဲကရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်စှပွေမိသားစုများအတွက်လွယ်ကူသောတဦးတည်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ မိမိအ mum, Anita အဆိုအရ;
ဟယ်ရီစိတ်ပိုင်း, ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်။ သူကအရမ်း Home ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အသက်အရွယ်မှာထွက်ရွေ့လျားအလွန်ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့အားလုံးသုံး - သူကျွန်တော်တို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ရှေ့တံခါးကိုပိတ်သကဲ့သို့ငါ့ကိုဂယ်ရီနဲ့ Milli ရပ်အော်ဟစ်ကြ၏။
ဟယ်ရီရဲ့မိဘများသာသူ့ကိုတစ်ညနေခင်းတစ်ပါတ်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ ဟယ်ရီရဲ့အဆိုအရသူကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတစ်ခါမျှလူတို့နှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါမိသားစုနေအိမ်ထဲကနေရွေ့လျားဖြစ်ကောင်းသူသည်မိမိဘဝတစျခုလုံး၌ပြစ်မှားမိခဲ့သောအခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟယ်ရီ Southgate, မြောက်ဘက်လန်ဒန်တစ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးဧရိယာ၌နထေိုငျဖို့သွားလေ၏။ သူသည်အဘယ်သူ၏နေအိမ်စပါးလူငယ်လေ့ကျင့်ရေးမြေပြင်နီးစပ်ခဲ့ Lesley နှင့် Matt အမည်ရှိကောင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှင့်အတူနေ၏။ ကံကောင်းတာကတစ်ဦးမောင်းနှင်သင်တန်းပို့ချသူ Matt မောင်းထုတ်ဖို့ဘယ်လိုဟယ်ရီသင်ပေးတယ်။
ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှထလော့
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာမှဟယ်ရီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တစ်သွားတာစိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ 27 ဇူလိုင်လ 2014 တွင်သူသည်အထင်ကြီးပြီးနောက်စပါးနှင့်အတူသူ၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုး Mauricio Pochettino သူအများအပြားကသူ၏ဖျော်ဖြေပွဲ၏ဗီဒီယိုများကြည့်။ ,
Pochettino မိမိအစပိန်ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ဆင်တူတဲ့ကစားသမားအဖြစ်ဟယ်ရီကိုမြင်လျှင် Xavi နှင့် Iniesta ။ သူလည်းအမည်ရသည်သူ၏ကွင်းလယ်ကစားသမားဖို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခြင်းသူ့ကိုကြည့်ရှု; ဗစ်တာ Wanyama, အဲရစ် Dier, Mousa Dembélé နှင့် Moussa Sissoko။ ဟယ်ရီရဲ့ပထမဆုံးလိဂ်ရည်မှန်းချက်အခမ်းအနားဘယ်လိုသူနဲ့ပြသ Mauricio Pochettino သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်ကတည်းကခိုင်မာတဲ့နှောင်ကြိုးတီထွင်ခဲ့သည်။
ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်ဟယ်ရီစပါးများအတွက်လိဂ်သာလေးစတင်အောင်ပေမယ့်အင်္ဂလန်တက်သည်ကိုခေါ်တယ်။ ဂါရတ် Southgate သူ့ကိုသူ၏သွားတာစံချိန်ကိုကျေးဇူးတင်ခူး။
ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
မင်းသိလား?… တိုင်းဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်များတွင်မိန်းကလေးအများဆုံးဆလူကြိုက်များဘောလုံးသမားများအတွက်လဲကြလိမ့်မည်။ ကြောင်းမိန်းကလေးရဲ့အသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်, နက်ရှိုင်းသောဆင်းတစ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားခြိနျးတှေ့ဖို့ဆန္ဒအမြဲရှိပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ရုပ်ရှင်တွေခဲကိုဘောလုံးကစားသမားချိန်းတွေ့များ၏ကျဘက်ကိုပြသပါ။ ဤသည်ဟယ်ရီသည်သူ၏အကြီးတန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အစောပိုင်းနှစ်တာကာလအတွင်းတစ်ခုတည်းခဲ့အဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူသည်မိမိအအကြီးတန်း 22 နှစ်ပေါင်းသူသည်ဗြိတိန်အဖြစ်မှန်ပြပွဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်, rosy ဝီလျံနှင့်အတူပြောက်အခါဟယ်ရီရဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆံရေးဟာပုံပြင် 2018 (ဇူလိုင်လ 4) ၏အသက်အရွယ်မှာရောက်လာတယ်။ အဆိုပါစုံတွဲကိုတစ်ချိန်က 5-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်, လန်ဒန်ရဲ့ Shangri-la ဟိုတယ်ထွက်ခွာပြောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူကသူမအတွက်ပွင့်လင်းတံခါးကိုကျင်းပအဖြစ်ဓာတ်ပုံများတွင်ဟယ်ရီ rosy အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလူကြီးလူကောင်းဖြစ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ ဤသည် rosy ရုံဗြိတိသျှမတ်ေတာသကျွန်းအဖြစ်မှန်ပြပွဲထဲကစွန့်ပစ်တယ်တဲ့အချိန်ပဲ။ တစ်ဦးစတိုင်အဝါရောင် blazer ထွက်နင်း, ဝလေအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သူမက admires ထိုလူအဘို့အလွန် leggy display ကိုအပေါ်ထားခဲ့ရတယ်။ ဟယ်ရီတစ်ဦးရည်းစားတစ်ခုသို့မဟုတ်ဇနီးအဖြစ်သူမ၏ယူပါလိမ့်မယ်လျှင်အချိန်သာပြောပြလိမ့်မယ်။
ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ဟယ်ရီရှက်နှင့်တိတ်ဆိတ်မွေးဖွားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူလူထူးလူဆန်းအဖိုးကြီးနှင့်လုံ့လရှိသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိအနုပျိုလက်ထက် မှစ. လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်းဒါဟာအလွယ်တကူပတ်ဝန်းကျင်၏အပြောင်းအလဲတစ်ခုသို့မဟုတ်သူ့ကိုဝန်းရံသည်ဟုမဆိုအသစ်သောစွမ်းအင်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသိလား?… အခြို့သောဘောလုံးသမားများနှင့်မတူဘဲဟယ်ရီစှပွေခွငျးဤမျှလောက်ပိုမိုနီးကပ်စွာပရိသတ်တွေနဲ့အတူမရပါဘူး။ သူကတခါကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဘို့ဘေးဥပဒ်ကိုပေးဆောင်ခဲ့လို့ဒါဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ငါ့ကိုတကယ်ဖြစ်ပျက်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြပါရစေ!
ဟယ်ရီတစ်ချိန်ကလေးလေးနက်နက်ရိုးမသားအကြံအစည်မသိမျက်တောင်ခတ်ရုံနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကွင်းလယ်လူတောင်းပန်တဲ့သူတစ်ဦးပန်ကာတို့က Watford အတွက်ကလပ်အတွက်ပြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, Nikhil Shah ကအမည်ရှိသောထိုပရိတ်သတ်တစ်ဦးဒဏ်ရာ nursing ရှိနေသော်လည်း clubbing သွားအပေါ်မျက်တောင်ခတ်ဖော်ထုတ်သည်သူ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
ပန်ကာလည်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရရန်ကြိုးစားနေသကဲ့သို့ဝေးသွား၏ the Sun ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်ကောင်းရှောက်သောဓာတ်ပုံတစ်ဦးရောင်းရန်ရှိသည်။ အောက်တွင်သည်သူ၏ Instagram ကိုအကောင့်ပေါ်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို upload ပြီးနောက်ရေးသားခဲ့သည်ရိုးရှင်းသောရှာနေပေမယ့်မကောင်းသောအစိတ် Nikhil Shah ကအဘယ်အရာကိုတစ်ဦးလျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစှပွေခွငျးဤမျှလောက်အထူးသဖြင့်မှားသောနေရာများအတွက်ပရိတ်သတ်များနှင့်အတူချည်နှောင်ခြင်းကိုရပါဘူးဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကရှင်းပြသည်။ စျေးပေါလူကြိုက်များရဖို့ရန်အပေါငျးတို့သအားထုတ်မှုနေသော်လည်း Shah ကထွက်စှပွေဖို့ကြိုးစားနေများအတွက်ပရိသတ်တွေအားဖြင့်ပျက်စီးတယ်။
တစ်ဦးကကော့ဝါသနာရှင်: ဟယ်ရီ Duty ဂိမ်း၏ခေါ်ဆိုမှုမှမိမိကိုမိမိစွဲသတ်မှတ်ထားသည်။
မိမိအအလုပ်များဘောလုံးအချိန်ဇယားရှိနေသော်လည်းဟယ်ရီနေဆဲ Duty ဖြစ်ရပ်များများ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုတကျရောကျဖို့အချိန်ကိုတွေ့။
ဟယ်ရီသကဲ့သို့စွဲမဟုတ်ပါဘူး Hector Bellerin တစ်ချိန်က 30 နာရီတစ်ပတ် Cod သူကိုကစားခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟယ်ရီစှပွေခွငျးကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဝိန်းရွန်နီကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Sean Longstaff ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်